Real Madrid oo guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Sevilla oo ay booqatay… +SAWIRO – Gool FM
(Sevilla) 22 Sebt 2019. Real Madrid ayaa guul muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Sevilla garoonkeeda Ramon Sanchez Pizjuan, kaddib markii ay kaga adkaatay 0-1, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee kulankii ugu adkaa toddobaadkan horyaalka La Liga ayaa lagu kala maray 0-0.
Marka dib leysugu soo laabtay qeybta labaad ee dheesha labada kooxood ayaa waxay sameeyeey qaab ciyaareed fiican, waxayna sameeyeen fursado halis ah ee goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 64-aad kooxda martida aheyd ee Real Madrid ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 0-1 ka dhigay weeraryahankeeda reer France ee Karim Benzema oo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis Dani Carvajal.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 0-1 ay guusha ku raacday kooxda Real Madrid oo ciyaartan marti ku aheyd garoonka Sevilla ee Ramon Sanchez Pizjuan.